Clearbit: Isticmaalka Caqliga-Waqtiga Dhabta Ah Si Aad Shakhsiyeed Uga Dhigto Oo U Wanaajiso Mareegtaada B2B | Martech Zone
Suuqgeeyayaasha dhijitaalka ah waxay diiradda saaraan inta badan tamartooda ku celinta taraafikada mareegtooda. Waxay maalgashadaan xayaysiisyada warbaahinta bulshada iyo kuwa kale ee dhexdhexaadka ah, waxay horumariyaan waxyaabo waxtar leh si ay u wadaan hogaaminta soo galeysa, oo ay wanaajiyaan shabakadooda si ay ugu sarreeyaan raadinta Google. Hase yeeshee, qaar badani ma garwaaqsadaan in, in kasta oo ay dadaalkooda ugu fiican yihiin, ay si weyn hoos ugu dhacayaan shabakadooda.
Hubaal, kordhinta taraafikada goobta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah istaraatijiyad suuq-geyneed oo dhan, laakiin macnaheedu maahan wax badan haddii booqdayaasha mareegaha aanay isa soo bandhigin (tusaale, iyagoo buuxinaya foom). Dhab ahaantii, inta badan waxaad haysataa kaliya 10 ilbiriqsi si aad u qabato dareenka booqdaha ka hor inta aysan ka bixin mareegahaaga. Haddii aad helayso booqdeyaal badan oo goobta ah laakiin aad ka xuntahay sida in yar oo iyaga ka mid ah ay u beddelaan hoggaanka, waa waqtigii aad samayn lahayd dhowr ilbiriqsi ee ugu horreeya runtii tirinta - waana halka shaqsiyaynta ay fure u tahay.
Isku day inaad qof walba la hadasho waxay la macno tahay inaad ku milmi lahayd awooda fariintaada dhagaystayaashaada dhabta ah. Habka suuq-geynta shakhsi ahaaneed, dhinaca kale,, waxay abuurtaa waayo-aragnimo ka fiican taas oo horseedaysa beddelaad degdeg ah iyo xiriirro rajo oo xooggan. Shakhsiyaynta waxay kordhisaa ku habboon ee fariintaada - iyo ku habboonaanta waa waxa wada hawlgelinta.
Hadda, waxaa laga yaabaa inaad naftaada u malaynayso, Sideen fariinta gaarka ah ugu gudbin karnaa 100, 1000, ama xitaa 10,000 shirkadood oo bartilmaameed ah? Way ka sahlan tahay sidaad u malaynayso.
Hababka ugu Wanaagsan ee loogu Beddelayo Gaadiidka Shabakadda oo badan
Kahor intaadan hirgalin suuqgeyn shaqsiyeed, waxaad marka hore u baahan tahay inaad sameyso go'aano ku saabsan cidda aad beegsaneyso. Ma jirto hab lagu wanaajiyo shaqsi kasta ama xitaa kala duwanaanshiyaha dhagaystayaal kasta. Diirada saar kaliya hal ama laba ka mid ah qaybahaaga ugu sarreeya, oo ay ogyihiin astaanta macaamiishaada ugu habboon iyo shakhsiyaadka suuqgeyneed, iyo waxa iyaga ka duwan kuwa tirada badan.
Sifooyinka adag ee caamka ah ee caawiya kala soocida qaybahan la beegsanayo waxaa ka mid ah:
Warshadaha (tusaale, tafaariiqda, warbaahinta, tignoolajiyada)
Baaxadda shirkadda (tusaale, shirkad, SMB, bilowga)
Nooca ganacsiga (tusaale, e-ganacsiga, B2B, raasamaal ganacsi)
Goobta (tusaale, Waqooyi-bari USA, EMEA, Singapore)
Waxa kale oo aad ka faa'iidaysan kartaa xogta tirakoobka (sida magaca shaqada) iyo xogta habdhaqanka (sida muuqaalada bogga, soo-dejinta waxyaabaha ku jira, safarrada isticmaalaha, iyo isdhexgalka summada) si aad u sii kala qaybiso isticmaalayaasha ku habboon iyo ujeedada. Fahamka wanaagsan ee booqdayaashaada waxay awood kuu siinaysaa inaad bilowdo qaabaynta safaradooda oo aad u habeeyaan salaantaada, socodka, iyo wax bixinta si waafaqsan.
Hubaal, waxaad u badan tahay inaad horeba u abuurtay bogag degitaan gaar ah qayb kasta, laakiin adoo tusinaya fariimaha ku haboon, wicitaanada ficilka, sawirada geesiyaasha, caddaynta bulshada, sheekaysiga, iyo walxaha kale, waxaad la xidhiidhi kartaa soo jeedinta qiimaha khuseeya ee dhammaan boggaaga.
Iyo qalab sirdoon oo rogaal celis ah sida CaddaynPlatform's Intelligence Platform's Reveal Intelligence Platform, waxaad si toos ah u bilawday nidaamkan oo dhan.
Dulmarka Clearbit Solution
Clearbit waa madal sirdoon suuqgeyn oo B2B ah oo u sahlaysa suuqgeynta iyo kooxaha dakhligu inay adeegsadaan xog qani ah, xog-waqtiga-dhabta ah dhammaan mashiinkooda dhijitaalka ah.
Mid ka mid ah awoodaha asaasiga ah ee Clearbit waa Muujin - nidaam dib u eegid IP ah oo si toos ah loo garto halka uu booqde mareegaha ka shaqeeyo, iyo in ka badan 100 sifooyin muhiim ah oo ku saabsan shirkaddaas oo laga helo madal sirdoon ee waqtiga-dhabta ah ee Clearbit. Tani waxay isla markaaba ku siinaysaa xog qani ah si ay awood ugu yeelato shakhsiyaynta - sida magaca shirkadda, cabbirka, goobta, warshadaha, tignoolajiyada la isticmaalo, iyo qaar kaloo badan. Xitaa ka hor intaanay bixin ciwaankooda iimaylka, waxaad ogaan kartaa cidda aad la macaamilayso - haddii ay yihiin xisaab bartilmaameed ama ay ku dhacaan qayb gaar ah - iyo sidoo kale boggaga ay baadhayaan. Isku dhafka Slack iyo emaylka, Clearbit wuxuu xitaa ogeysiin karaa iibka iyo kooxaha guuleysta isla marka bartilmaameedyada bartilmaameedka ah iyo xisaabaadka muhiimka ah ay yimaadaan mareegahaaga.
Iyadoo Clearbit, waxaad awoodi kartaa:
U beddelo booqdayaal badan dhuumo: Aqoonso booqdayaasha shabakadda ee ku habboon, samee khibradaha gaarka ah, gaabin foomamka, oo ka hel inta ugu badan ee gaadiidkaaga qiimaha leh.
Shaac soo-booqdayaasha degelkaaga qarsoodiga ah: Isku dar koontada, xiriirka, iyo xogta sirta IP si aad u fahanto taraafikadaada oo aad u aqoonsato rajooyinka.
Ka saar khilaafka oo kordhi xawaaraha-u-hoggaanka. Soo koob foomamka, gaaryeel khibradaha, oo u dig kooxdaada iibka wakhtiga dhabta ah marka koontooyinka ku haboon ay muujiyaan ujeedada.
Si ka duwan xalalka kale ee bixiya kaliya macluumaadka xiriirka iibka, Clearbit waxay siisaa 100+ sifooyin in ka badan 44M shirkadood. Iyo, si ka duwan sida kuwa xiran, xalalka suuit ee "dhammaan-hal-hal" ah, Clearbit's API- platform ka ugu horreeya wuxuu fududeynayaa in la isku daro xogta Clearbit iyo nidaamyadaaga jira oo aad ka shaqeyso dhammaan xirmadaada MarTech.
Clearbit sidoo kale waxay bixisaa nooca bilaashka ah ee awoodahaan Warbixinta Booqdaha Todobaadlaha ah, kaas oo tilmaamaya shirkadaha booqanaya mareegaha iyo boggaga ay booqdeen. Warbixinta toddobaadlaha ah ee habaysan, is dhex galka ah waxaa lagu soo gudbiyaa iimayl Jimce kasta waxayna kuu ogolaaneysaa inaad ku jebiso booqdayaashaada tirada booqashooyinka, kanaalka iibsiga, iyo sifooyinka shirkadda sida warshadaha, tirada shaqaalaha, dakhliga, tignoolajiyada, iyo wax ka badan. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa ku rakib qoraal khafiif ah boggaaga, kaas oo ku duraya pixel (faylka GIF) bog kasta. Kadib, mar kasta oo booqde ah uu buuxiyo bog, Clearbit wuxuu diiwaangeliyaa cinwaanka IP-ga wuxuuna la mid yahay shirkad si aad si fiican u fahamto oo aad u beddesho hantidaada ugu qiimaha badan - your website traffic .
Isku day Warbixinta Booqdaha Todobaadlaha ah ee Clearbit oo bilaash ah
Kordhinta Waxqabadka Mareegta B2B ee Clearbit
Meesha ugu fiican ee laga bilaabo tijaabinta shaqsiyeynta mareegta waa ciwaannadaada, tusaalooyinka macaamiisha, iyo CTA-yada. Tusaale ahaan, U dir, Shirkad software wadaaga dukumeenti, ayaa tan u samaysay dhagaystayaashooda bartilmaameedka - bilowga, maal-qabeenada, iyo shirkadaha ganacsiga. Markii dhegaystayaal kastaa yimi degelka DocSend, waxay heleen fariin geesinimo leh, bayaan qiimo leh, iyo qayb-caddayn bulsho oo leh calaamado shirkadeed oo khuseeya. Qaybta caddaynta bulshada ee shakhsi ahaaneed waxay keentay 260% korodhka qabashada rasaasta oo keliya.
Markaad shakhsiyayso boggaga internetka oo aad ku qanciso booqdayaasha inay ku dhegganaadaan, waxaa weli jirta arrin ku saabsan u beddelidda taraafikada inay noqdaan hoggaan. Foomamka leh meelo badan, tusaale ahaan, waxay noqon karaan barta ugu weyn, taasoo keenta iibsadayaasha inay gunuunacdaan oo ay ku degdegaan iyaga - ama damiin gebi ahaanba.
Tani waa dhibaato taas Duufaan, webinar iyo madal kulan muuqaal ah, ayaa ugu baaqay Clearbit inay gacan ka geysato xallinta. Markii ay timid foomkooda isdiiwaangelinta tijaabada ah ee bilaashka ah, waxay arkayeen 60% heerka hoos u dhaca. Taasi waxay la macno tahay in in ka yar kala badh booqdayaasha goobta ee gujiyay badhanka "isku day bilaash" dhab ahaantii ay dhameeyeen isdiiwaangelinta oo ay galeen raadaarka kooxda iibka Livestorm.
Foomka isdiiwaangelinta waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo aqoonsiga hogaaminta rajada leh, laakiin waxaa jiray meelo badan oo la dhammaystiri karo (magaca koowaad, magaca dambe, iimaylka, magaca shaqada, magaca shirkadda, warshadaha, iyo cabbirka shirkadda) waxayna dadka hoos u dhigtay.
Kooxdu waxay rabeen inay soo gaabiyaan foomka is-diiwaangelinta iyagoon lumin xogta asalka ah ee qiimaha leh. Iyada oo Clearbit, oo adeegsata ciwaannada iimaylka si ay u eegaan macluumaadka ganacsiga ee hogaanka, Livestorm waxay ka jartay saddex goobood foomka guud ahaan (magaca shaqada, warshadaha, iyo cabbirka shirkadda) oo si otomaatig ah u buuxisay saddexda goobood ee soo hadhay (magaca koowaad, magaca dambe, iyo shirkadda). magaca) isla marka uu hogaanka u qoro ciwaanka iimaylka ganacsigooda. Tani waxay ka tagtay hal goob oo loogu talagalay gelitaanka gacanta ee foomka, hagaajinta heerarka dhamaystirka 40% ilaa 50% iyo ku darista 150 ilaa 200 oo dheeraad ah bishii.
Foomamka ka sokow, hab kale oo loogu beddelo taraafikada mareegaha hoggaanka waa iyada oo loo marayo waayo-aragnimada chatbox-ka ee la habeeyey. Wada-sheekeysiga goobta-guud waxa ay ku siinaysaa hab saaxiibtinimo leh oo lagula falgalo dadka soo-booqdayaasha ah ee boggaaga oo ay ugu adeegaan macluumaadka ay u baahan yihiin wakhtiga dhabta ah.
Dhibaatadu waxay tahay inaadan inta badan sheegi karin cidda rajadaada ugu qiimaha badan ay ka mid yihiin dhammaan dadka bilaabay wada sheekeysiga. Waa wakhti lumis iyo agab - iyo inta badan aad qaali u ah - in aad u hurto qadar tamar la mid ah si loo hoggaamiyo taas oo aan ku habboonayn astaanta macaamiishaada (ICP).
Laakiin ka waran haddii aad haysatid hab aad diiradda u saarto ilahaaga wada sheekaysiga tooska ah VIP-yadaada? Markaa waxaad siin kartaa waayo-aragnimo gaar ah oo heersare ah adigoon daaha ka qaadin muuqaalka wada sheekaysiga booqdayaasha aan weli u muuqan inay aqoon sare leeyihiin.
Tani way fududahay in la sameeyo iyada oo la dhexgelinayo Clearbit qalabyada lagu sheekeysto sida Drift, Intercom, iyo Qualified si loo dejiyo sheeko kicinaysa xogta Clearbit. Waxaad soo diri kartaa booqdayaasha u eg ICP kaaga waxyaabo badan oo khuseeya, sida kedis, ebook CTA, ama codsiga demo. Weli waxaa ka sii wanaagsan, waxaad tusi kartaa wakiilka dhabta ah ee wada sheekeysiga si aad u bixiso adeeg shaqsiyeysan oo aad u muujiso booqdaha in ay la hadlayaan qof dhab ah (halkii bot). Waxa kale oo aad u habayn kartaa fariintaada si aad u isticmaasho magaca shirkada soo booqatay iyo macluumaadka kale adiga oo isticmaalaya qaabka sheyga iyo xogta Clearbit.
Si ay u siiyaan booqdayaasha goobahooda khibradda ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, madal database MongoDB hirgaliyay raadad wada sheekaysi oo kala duwan: rajooyin hoose, rajooyin sare, taageerada macaamiisha, iyo kuwa danaynaya inay wax ka bartaan badeecadooda bilaashka ah, bulshada, ama Jaamacadda MongoDB.
Iyada oo la kala saarayo khibradda sheekeysiga ee qayb kasta, MongoDB waxay aragtay 3x wadahadalo badan oo lala yeesho kooxda iibka waxayna xiirtay wakhtiga-buug-buugsiga maalmo ilaa ilbiriqsi. Halka foomka xidhiidhka ee MongoDB uu taariikh ahaan ahaa darawalka koowaad ee wada sheekaysiga iibka, sheekadu waxay tan iyo markaas u soo baxday inay tahay isha ugu weyn ee gacan-qaadayaasha.
Ogeysiinta Iibka-Waqtiga dhabta ah
Laakiin maxaa dhacaya ka dib marka booqdayaasha goobta ay buuxiyaan foom ama kula soo xiriiraan adiga oo ku sheekeysanaya? Xataa daahida jawaabta ugu yar waxay ku kici kartaa shirar iyo heshiisyo cusub.
Kahor intaadan isticmaalin Clearbit, radar, shirkad bixisa horumariye-saaxiibtinimo, xalalka ugu horreeya ee asturnaanta, waxay dib ugu soo noqotay hogaanka saacad gudaheed foomka soo gudbinta - taasna waxaa loo tixgeliyey mid wanaagsan! Kadibna, Radar wuxuu bilaabay isticmaalka Clearbit si uu u ogeysiiyo dib u soo celinta markii akoon bartilmaameedku ku yaalo goobtooda - marka xiisaha iyo iibsigu ay ugu sarreeyaan - hoos u dhigista xawliga ay ku hogaaminayaan daqiiqado gudahooda koontada ku dhufatay boggooda.
Si taas loo sameeyo, waxay go'aansadeen booqdeyaasha kicin doona ogeysiisyada, oo ku saleysan aragtida bogga, Salesforce, iyo xogta firmographic.
Dabadeed, digniinaha waqtiga-dhabta ah ee Slack (ama qaabab kale sida emaylka dheef-shiid kiimikaadka) waxay soo bandhigeen macluumaadka ku saabsan shirkadda, bogga ay ku jireen, iyo boggoodii ugu dambeeyay ee aragtida taariikhda.
Raadaarka xitaa wuxuu dejiyay digniinaha kanaalka dadweynaha - iyadoo la xusayo wakiilka saxda ah si loo ogeysiiyo iyaga - si qof kasta oo shirkadda ka mid ah uu u arko waxa dhacaya, uga falceliyo, oo wax ku biiriyo. Emojis dabbaaldegga dhexdiisa, ogeysiisyadu waxay siinayaan barta wada shaqayn cusub qof walba - ma aha oo kaliya wakiilka loo xilsaaray - si ay uga caawiso beddelka macmiilka. Awood u leh inay ku arkaan akoon boggooda Clearbit, gaadhaan wakhtiga saxda ah, oo ay ballan qabsadaan, Radar wuxuu soo saaray $1 milyan oo dheeraad ah dhuumaha.
Wax badan ka baro Clearbit
Tags: b2bb2b nuxur firfircoonB2b beddelka rasaastab2b sirdoonka marketingcabbirka ganacsigachatkhibrad sheekoshakhsiyaynta chatcadeynwarshadaha shirkaddagoobta shirkadumagaca shirkaddabadalo badanxogta dadkadocsendnuxurka firfircoongeesi firfircooneBookisdhexgalka emaylkashirkadgaraafyadaqaab qabsisirdoonka ipbeddelidda hogaankaDuufaangoobtaMongoDBaragtida boggapixel gifkediskaogeysiisyada waqtiga-dhabta ahShakhsiyeynta waqtiga-dhabta ahmuujin garaadkadib u eegid iproga ip-indheergaradnimadaroga-ipogeysiisyada iibkadhuumaha iibkaiibinfursadaha iibkafursadaha iibkafoomamka gaabinfoomka saxiixafeejignaan dabacsanis dhexgalka dabacsantignoolajiyada la isticmaalokicinwargelin kicinnooca ganacsigashakhsiyaynta website-kawarbixinta booqdaha toddobaadlaha ah
Calaamadaha u hamuun qaba ka-qaybgalku waa inay sameeyaan saddexdan shay